Fitsipika momba ny fivezivezena COVID-19 navoaka ho an'ny nosy Karaiba Holandey, St. Eustatius
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Md Eugène » Fitsipika momba ny fivezivezena COVID-19 navoaka ho an'ny nosy Karaiba Holandey, St. Eustatius
Toy ny tamin'ny 1 febroary 2021, ireo yachts mitsidika an'i Statia avy amin'ny firenena tandindomin-doza dia afaka mangataka fahazoan-dàlana hiditra ao amin'ilay nosy nefa tsy mila karokantine.
Yachts avy any amin'ny firenena tandindomin-doza dia afaka mangataka alàlana hiditra raha tsy mila quarantine
Ny yacht rehetra dia avela hipetraka amin'ny rano Statia nefa tsy mandeha amin'ny morontsiraka.
Ny mponina ao Statia dia afaka manondraka ny sambony any amin'ny seranan-tsambo
Ny governemanta St. Eustatius (Statia) dia namoaka torolàlana vaovao momba ny fampiantranoana yachts nosy nandritra ny fotoana Covid-19.
Toy ny tamin'ny 1 Febroaryst, 2021, ny yachts mitsidika an'i Statia avy amin'ny firenena tandindomin-doza dia afaka mangataka fahazoan-dàlana hiditra ao amin'ilay nosy nefa tsy mila quarantine. Ny fangatahana fidirana dia tokony horaisina farafahakeliny 72 ora alohan'ny datin'ny fahatongavany. Ny fankatoavana dia ao anatin'ny 48 ora aorian'ny nahazoana ny fangatahana.
Ny mpiasa rehetra ao amin'ny yachts izay nitsidika firenena tandindomin-doza nandritra ny 14 andro farany, dia tsy maintsy mijanona amina quarantine ao anaty yacht mandritra ny 14 andro alohan'ny avela hidina amoron-tsiraka any Statia.
Ny sekoly mitsorika any amin'ny nosy dia afaka mitsidika ireo yacht avy amin'ny firenena atahorana mafy ary handamina fitsangantsanganana antsitrika mivantana avy ao amin'ny yacht. Ireo mpisitrika amin'ireo yacht ireo dia tsy maintsy manana taratasy fanamarinana PADI.
Na dia nakatona amin'ny fomba ofisialy aza ny seranana mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny, ny mponina ao Statia dia afaka manondraka ny sambony any amin'ny seranan-tseranana. Raha manandrana miantsona amin'ny faritra hafa ny sambo, dia hoentina mankany amin'ny seranan-tseranana izy ireo.
Mandeha be i Marriott any Karaiba sy Mexico: tian'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika izany